Dhawaqyadda Xanafta leh ee Dacartii Doorashadda Iyo Durbaanka Damaashaadka Ee Daanta kale | Qaran News
Writen by Qaran News | 11:38 pm 4th Dec, 2017
Doorashadda Iyo Durbaanka Damaashaadka Ee Daanta kale
“.. Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin meel walba Waxay Kaga khudbadeeyen Soomali-weyn-bay Ina geynayaan [Gar-xajis]..”
Siyaasi Guuleed Daahir
“..Anigoo Nin Habar-Awal ah, Muuse Biixi, Degmadda Sheekh Igu Xukumi-Maayo Ee Haku e’kaado Xaafadda 26-Ka Juun..”
Siyaasi Cabdisamad Axmed Boon
“..Hawsha Taala way ka SINNO Weyn tahay Cirro waayey Kursiga oo Muuse Helay … Nabadda Ilaali waxa ka horreysa Cadaaladda Ilaali..”
Siyaasi Muxiyo-diin Good Abaas
Burco(Qaran news)-Siyaasiyiin, Mujaahidiin, Odayaal iyo aqoonyahan ku abtirsada gobollada Togdheer iyo Saaxil, ayaa dedeefeeyey natiijadda kasoo baxday Doorashadii aqalka Madaxtooyadda ee dalka ka dhacday 13-kii Novomber, taasoo ay sheegeen inuu hadheeyey Musuq-maasuq, wax-isdaba marin iyo mad-madow baahsan, isla markaana ay ahayd mid aan la aqbali karin.
Sidoo kale, xubnahaasi waxay si adag uga hadleen dadkii ku dhintay dibed-baxyadii shacabku ku muujinayeen dareenkooda ah inay diidan yihiin hanaankii loo maamuley Doorashadda iyo natiijadii laga soo saaray, dhacdadaas oo hal-doorkaasi ku tilmaameen mid arxan darro ahayd, oo aan cidina aqbali karin. Hal-doorka labada gobo lee Saaxil iyo Togdheer oo shalay Shir-jaraaid wada-jir ugu qabtay Magaaladda Burco ee xarunta gobolka Togdheer kamid ahaa Muj. Dayr Xiniinyo-dheer, Siyaasi Guuleed Daahir, Siyaasi Muxyo-diin Good Abaas, siyaasi Cabdisamad Axmed Boon, Siyaasi Saleeban…
Siyaasi Cabdisamad Axmed Boon oo si gaar ah isaggu u xusay labo dhacdo oo kala ah Dilalkii loo geystay dadkii dibed-baxa nabad-gelyada ah waday iyo caleemo-saarka Madaxweynaha cusub ee la filayo 14-ka December 2017-ka waxa uu yidhi ; “.Waxan aamin-sanahay dadkii la laayey inay yihiin Mujaahidiin oo ay jannada galleon, laakin raggi amray Burco ayey jiifan, kuwii dileyna Burco ayey jiifan, hadii sharciga la keeni waayo dadkaas, gacantaydan ku keeni doonaa sharciga. Kuwa Maanta markay Xisbi yeesheen oo xukunkii kusoo dhowaadeen la leeyahay Awoowayaashood ayaa Xamar-tagay ee hala-laayo oo rasaas halala-dhaco. Waxa kaloo aan leeyahay dhibka lagu hayo Buhoodle iyo Laascaanood in badan ayeynu dhegeysanaay, wax la aqbali karo maha, hadii la doonayo dhismaha qaranka Somaliland leedahay. Waa waajib inaynu ka dagaalano, Inaan si fudud qofna xabad loogu dhufan, haday burco tahay iyo hadday boorama tahayba.
Talladii gar-adag ee Maanta Muuse Biixi lagu doortay, waxan u maleynayaa in loo calaamo-saarayo Madaxweynaha 26 Jun ama Jeegaan loo caleemo-saarayo, hadii caleemo-saarka ka hor talo aan laga yeelan wixii dhacay, oo aan meel la saarin, Anigoo ah Nin Habar-awal ah Muuse Sheekh igu xukumi-maayo ee haku ekaado Xaafadda 26-ka Juun..”. Sidoo kale, Oday Deyr Maxamed Cilmi (Deyr Xininyo dheere) oo isna halkaa ka hadlay, waxa uu sheegay inuu la qabo dadka aragtiyihii dadka ka hadlay shirka, waxana kamid ah hadalladiisi. “..Todobadii sanno ee Madaxweyne Siilaanyo xilka hayey miyaad igu aragteen Warbaahinta, waa maya, waxaan leeyahay Maanta dadkii halkan ka hadlay fikiradoodii waan la qabaa”.
Docda kale, Siyaasi Muxyo-diin Good Abaas, oo ka hadleyey cadaalad darro uu sheegay inay dhacday xilliga doorashada waxa uu yidhi; “..Waxa la yidhi Gar waxa lagu baadi-doonaa gar, Mandheerna waxa lagu baadi-doonaa genkeeda. Maanta hawsha taala way ka sinno weyn tahay Cirra-waayey Kursiga oo Muuse helay. 20-sanno ayaa talladii dalka laga ilaaliyey dad gaar ah, oo kuwasoo jeegaan ama xulufo waxay doonaan hala-baxaanee, waxan leeyahay nabadda ilaali waxa ka horreysa Cadaaladda ilaali, waayo hadaan caadaaladda la ilaalin nabadii jiri-mayso.”.
Waxa kaloo, halkaa ka hadlay Muj. Guuleed Daahir Samatar, waxana uu yidhi sidan; “..Waxan leeyahay taageerayaashii Waddani, waad halganteen, waad codeyseen, laakin waxa idin ku dhacday Cadaalad darro, boob, dhac iyo musuq-maasuq. Inaggu waynu guuleysanay reer Waddaniyow niyadiina geliyo, guuleysanaa doontaan dibed iyo gudo-ba taageeraayaasha Xisbiga Waddani fariintaa ayaan u dirayaa. Somaliland dadka joogaa ma wada xuma, dhibna may wada geysan, laakin waxan ku hadlayaa magaca Garxajis oo iyaggu tirsanaayey dhib, dulmi iyo tacadiyo faro-badan intaa waxanu ku ilaaweynay midnimada iyo wada-jirka qaranka Somaliland. Dadkii dhibtaa geysanaayey waa inta manta la baxday Jeegaanta ee boobka cad ku sameeysay doorashadda si dadka qaarna loo nooleeyo, qaarna loo gummeeyo. Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin waxay meel walba la taagnaayeen oo khudbadahoodu waxay ahaayeen Soomali-weyn ayey ku socdaan Gar-xajis, oo way ina qaadayaan. Maxamed Kaahinow hadii cadaalad la waayo waa la isku karaamo seegi, oo la isku baabi’in”. Waxa kaloo, masuuliyiintan oo aad u tiro-badnaa taageereen shirka Taageerayaasha Waddani ee lagaga dhawaaqay Gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceerigaabo.
Talaabooyinka Raysal-wasaare Dr. Abbiy Ahmed Ali Waa Qaar Ka Mid Ah . “Taxanaha Geeska Cusub” Q:3aad
Xukuumadda Somaliland oo Shirar Gaar-gaar ah la Yeelatay Waxgaradka iyo Dhalinyarada Sool
Canada oo 15 sano ku xukuntay Soomaali afduub ka qayb qaatay
Daawo kulan balaadhan oo lagaga hadlaayay arimaha naafada Somailand oo ka dhacay London
Daawo: Suuqa-yadda Ciidka Burco Oo Camirmay
Qiimaha uu wakhtigu leeyahay
“Wasiirka Maaliyaddu Dheg Uma Dhigi Doono Dhaleecaynta Dhaameel-quuteyaasha
Daawo barnaamij ka hadlaaya biyo yaraanta magaalada Hargeysa
How Can Somaliland Heal The Wounds Of Ceelafweyn War?
Xukumada Muuse biixi oo ku guuldaraysatey wax-ka-qabashada Qandaraasyo ay sifo baalmarsan Sharciga u bixisay Xukumadii Siilanyo